Codsiyada ugufiican ee lagu daawado kubada cagta | Ragga Stylish
Barnaamijyadan kubadda cagta ayaa loo qaabeeyey dhammaan taageerayaasha cayaaraha iyo gaar ahaan qaybtaan. Codsiyada qaarkood marka laga reebo inay ku siinayaan waxa ugu fiican ee barnaamijyadooda taxanaha ah, barnaamijyada iyo filimada, waxay ku siinayaan suurtogalnimada ku soo biir isboortiga ugu fiican, gaar ahaan kan kubada cagta
Codsiyada kale ee loogu talagalay kubbadda cagta waxaa si gaar ah loogu talagalay inay awood u yeeshaan inay si gaar ah u daawadaan cayaarahaan. Dhammaantood waa lagu soo dejisan karaa bilaashIn kasta oo qaarkood ay ku siinayaan warbaahintooda si bilaash ah, kuwa kalena waa inaad bixisaa lacag bille ah si aad u daawato.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay ku bixiyaan noocyo kala duwan oo badan oo ku jira cuntadooda, laga bilaabo horyaalka Isbaanishka, kan Talyaaniga ama kan Ingiriiska iyo xitaa isboortiga kale sida MotoGP ama Formula 1.
1 Codsiyada kubbadda cagta ee ka hooseeya rukunka iyo bixinta
1.3 tv orange
2 Barnaamijyada kubada cagta ee daawashada bilaashka ah
2.1 Casaan toos ah
2.2 Tooska Tooska ah GP
2.5 Kubada cagta tv-ga tooska ah
Codsiyada kubbadda cagta ee ka hooseeya rukunka iyo bixinta
Waa codsi caan ah oo la yaqaan oo ka mid ah kuwa ugu baahida badan. Qeybteeda dhexdeeda waxay galeysaa awoodda daawashada taxanaha, filimada, barnaamijyada iyo isboorti badan. Waxay leedahay xuquuqda Horyaalada Isbaanishka iyo Uefa Champions League oo si aad u aragto waxaad u baahan doontaa inaad sameyso rukhsad oo aad bixiso bil kasta khidmad.
Codsigan wuxuu ku siinayaa dhamaan kubbada cagta iyo Waxay ku siineysaa qeexitaanka ugu fiican si aad ugu raaxeysato gebi ahaanba, maaddaama ay ku jirto fiidiyowgeeda qulqulaya iyo mudnaanta daawashada cayaaraha tooska ah.
Kaliya kuma siinayso ciyaaro toos ah, laakiin sidoo kale waxay bixisaa dukumiintiyo kala duwan iyo wareysiyo wax walba oo la xiriira adduunka isboortiga.
Waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada telefishanka ee bixiya barnaamijkooda sidaas waxaad ka arki kartaa waxyaabaha ku jira qalab kasta. Sida iska cad, si aad u daawato kubada cagta, waa inaad sameysaa lacag bixin bille ah. Qaabkeeda qandaraasku waa xulashada xirmooyinka halka Waxaad ku kiraysan kartaa xirmada kubada cagta adeegyada taleefankaaga.
Waa mid kale oo ka mid ah codsiyada la doorbido tan iyo markii ay ku guuleysatay ilaa 90 kun oo adeegsadeyaal ah Play Store. Waxaad ka arki kartaa dhammaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin cayaaraha Kaga noolaaw dhammaan horyaalada, horyaalada iyo aaladaha aad doorbido.
Codsigan sidoo kale wuxuu u taagan yahay dammaanadda uu bixiyo iyo inuu awood u leeyahay inuu arko kubbadda ugu fiican. Si loo adeegsado codsigan, waa inaad sameysaa rukumo oo aad ka mid noqotaa Open Cable's OpenFutbol. Si aad ugu raaxeysato codsigan bilaa qashin ama hakad, waxaa fiican inaad haysato ugu yaraan xawaare internet oo ah 6 Mb.
Waxay ku siineysaa waxa ugu fiican ee kubada cagta iyo horyaalkiisa, maaddaama aad marin u leedahay dhammaan cayaaraha toddobaadlaha ah, oo ay ku jiraan kuwa haweenka. Waxay bixisaa barnaamijyo ka hadlaya, oo kooban iyo tirakoob, laakiin haa, sida xaqiiqada ah si aad uhesho waxyaabaha qaarkood waa inaad sameysaa nooc ka mid ah rukunka ama lacag bixinta.
Barnaamijyada kubada cagta ee daawashada bilaashka ah
Waa in la ogaadaa in codsiyadaani ay ku bixiyaan adeegyadooda bilaash iyo in aysan iyagu sharci darro ahayn gabi ahaanba. Aragtidiisu waxay ku saleysan tahay "hubinta in degel kasta ay ku jirto xuquuqda sii deynta waa mas'uuliyadda isticmaalayaasha." Haddii aad ka mid tahay kuwa doonaya inay isku dayaan, waa kuwan kuwa hadda si fiican u shaqeynaya:
Codsigani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna wanaagsan ee ay soo bandhigeen adeegyadooda sannado si aad si toos ah uga daawan karto dhammaan kubbadda cagta. Waxaa kala soo degsada Google Play iyo Apple Store oo had iyo jeer ku bixiya amaankiisa. Waxay ku bixisaa dhammaan horyaalada Yurub iyo Koonfurta Ameerika oo bilaash ah.
Tooska Tooska ah GP
Codsigan waxaa si fudud loogu soo dejisan karaa qalab kasta. In kasta oo horumariyayaasheeda aysan tilmaamaynin in muuqaalkeedu bilaash yahay, dhab ahaantii waa sidaas. Waxay sidoo kale bixisaa waxyaabo badan oo badan, sida qayb leh natiijooyinka oo dhan, adeegyo leh astaamo badan oo dheeri ah, ama jadwalka taariikhda dhammaan kulammada la ciyaari doono.
Galitaanka degelkeeda rasmiga ah waxaad ka heli kartaa isku xirka si aad u soo dejiso barnaamijkeeda. Horeba waa codsi duug ah oo ay si fiican u yaqaanaan taageerayaasha kubada cagta. Waxay had iyo jeer dammaanad qaadday baahinteeda waxaana lagu soo dejiyaa kumanaan qalab.
Sida barnaamijyadan oo dhan, waxay siisaa ciyaaro kubbadda cagta ah iyo dhacdooyin isboorti gebi ahaanba bilaash ah. Waad kala soo dejisan kartaa Google Play laakiin nidaamyada iO-yada wali nuqulkiisa lama soo saarin. Waxa aad ka heshay barnaamijkan ayaa ah inaad arki karto ilaa laba kulan isla waqtigaas isla markaana aad ka daawan karto meel kasta oo aad rabto.
Kubada cagta tv-ga tooska ah
Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aad kala soo bixi karto Google Play-kaaga. Waxay siisaa tabinta tooska ah ee cayaaraha kubbadda cagta aan xisaab lahayn oo bilaash ah. Si fiican ayaa loogu qiimeeyaa qaybteeda laakiin dad badan ayaa wali ka cabanaya baahintiisa liidata iyada oo aan la ogayn haddii ay khalad tahay qalabka la isticmaalay ama nooca xawaaraha la isticmaalay
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee sida ugu fiican u shaqeeyay. Kubadda cagta waxaad ka daawan kartaa tooska iyo khadka tooska ah ee mobilada. Waxaa lagala soo baxaa Google Play waxyaabaha ku jirana waa sahlan tahay in la isticmaalo adigoo raacaya talaabooyinkiisa si sax ah. Si loo helo tartankooda waa inaad ka heshaa iskuxirayaasha kanaallada internetka. Haddii aad rabto inaad si faahfaahsan u ogaato sida ay u shaqeyso waxaad geli kartaa xiriiriyahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Codsiyada ugu fiican ee lagu daawado kubada cagta